Posted by nigimi77 on Jan 15, 2011 in News | 1 comment
အခု တလော စစ်မှုထမ်း ဥပဒေနဲ့ပတ်သပ်ပြီး တိကျခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းအရာ ဘာတစ်ခုမသိရသေးပါဘူး။
ဝေဖန်ချက်တွေကတော့ တော်တော်များတယ်။ ပေါက်ကရတွေရော တည်တည်တန် ့တန် ့တွေရောပဲ။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲ စစ်မှုထမ်း ဥပဒေရှိပါတယ် ။ အမျိုးသမီးတွေတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ မြန်မာတွေ အလွန် နှစ်ချိုက်နေတဲ့ ကိုရီးယား စစ်မှုထမ်း ဥပဒေအပေါ် လည်း သူတို ့လူမျိုးတွေ ဝေဖန်ကြတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ အထဲက အရင်က စစ်မှုထမ်းကာလ ၂၁လ ကနေ လီမြောင်ဘာဂ် အစိုးရက ၂၄လ (၂နှစ်) အဖြစ်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း အပေါ်မှာ ငြင်းကြ ခုန်ကြတာတွေ ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
A:) အစိုးရက လုပ်တတ်တာ ဒါပဲရှိသလား ???????? စစ်မှုထမ်းကာလကို တိုးမြှင့်ပြီး ဘာလုပ်မလို ့လဲ
တော်တော် ခက်တဲ့ဟာတွေပဲ ။ ရီချင်တယ် တကယ်ပဲ။ ရှေ ့လျောက်တော့ စစ်မှုထမ်းဖို ့သွားတဲ့လူတွေတော့
ခွေးလို နွားလို ခံစမ်းပဲ။
B:) စစ်ထဲ အရင် ဝင်ကြည့်ပြီးမှ ဒီလို စာမျိုးရေးပါ။
C:) မောင် (A) ရေ။ မင်း အတွေးအခေါ်နဲ့နေတတ်စမ်းပါ။ ၂၄ လ ဘာဖြစ်လဲ။ ဘာ? ၃ လ ပိုသွားတာကြောင့် အစိုးရက လုပ်တတ်တာ ဒါပဲရှိလား..ဟုတ်လား ?? စစ်ထဲဝင်ကြည့်ပြီး ပြန်ထွက်လာမှ ဒီလိုစကားမျိုးပြောဟဲ့ နွားရဲ ့။ မင်း Youn Phyung Do မှာ တာဝန်ကျတဲ့ စစ်သားတွေကိုမှ အားမနာဘူးလား ? မင်းလိုကောင်မျိုးတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့အသက်ကိုရင်းပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတာကွ။
D:) စစ်ထဲဝင်စရာမလိုတဲ့ ဒီနိုင်ငံရေးသမား အမတ်တွေ… စစ်မှုထမ်းကာလကို လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ နင်တို ့တွေ
ပဲ စစ်ထဲဝင်ကြည့်ပြီးမှ ကာလတိုးဖို့စကားကိုပြောကြ။
E:) အခုတစ်လော စစ်မှုထမ်းကာလနဲ ့ပတ်သပ်ပြီးပြောကြဆိုကြတာတွေကို ကြည့်ရင် ပြောဆိုကြတဲ့ စကား
လုံးတွေ ၈၀% နဲ ့အထက်ဟာ မူလတန်း/အလယ်တန်း/အထက်တန်း နဲ့စစ်ထဲဝင်စရာမလိုတဲ့ သက်ကြီးပိုင်း
တွေ အချို ့ပါဝင်ပြီး ဒါမှ မဟုတ်ရင် စစ်ထဲမဝင်ဖူးတဲ့ ဝင်စရာမလိုတဲ့ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ မိသားစုက ကောင်တွေ
ဒါမှ မဟုတ် အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ အခွင့်ထူးခံစားခွင့်ရှိတဲ့ကောင်တွေနဲ ့သူတို ့ရဲ ့အနွယ်တွေ အချို ့ပါဝင်နေတယ်။
ဘာမှ မဟုတ်တာလေးနဲ ့ပဲ စကားလုပ်နေကြတယ်။ ငါတို့အဖေတွေ ခေတ်ကို ပြန်တွေးကြည့်ရင် အချိန်အတိုဆုံးအနေနဲ့၃ နှစ် ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ပိုပြီး စစ်မှုထမ်းခဲ့ကြတယ်။ ခေတ်က ပြောင်းလာတော့ စစ်တပ်ဖျက်သိမ်းပါဆိုတာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင် တခြားနိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ ့မယ်ဆိုတာနဲ့တကယ့် ကောင်တွေပဲ။
(သေချာပေါက် ငါလဲပဲ လွှတ်တော်က ဆောက်ရူး ကောင်တွေပြောတဲ့ စကားတွေကို တကယ့်ကို ဆောက်ရူး
စကားတွေလို့ထင်တယ်) တကယ်တမ်းပြောရရင် ငါတို ့ရဲ ့အဖေတွေ ခေတ်က ဒီထက်ပိုပြီး တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို ့အတွက် တိုတောင်းလှတဲ့ဘဝတွေကို စွန် ့လွတ်ပြီး မိသားစုရင်ခွင်ကို ခွဲခွာပြီး ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့ သူတွေရှိခဲ့တယ်။
စစ်ထဲတောင် မဝင်ဖူးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလို ပေါက်ကရတွေပြောနေကြတာလဲ ?? စစ်တပ် မရှိလဲပဲ ဒီနိုင်ငံရဲ ့
ကာကွယ်ရေးက ထိခိုက်မသွားဘူး ဆိုရင်တော့ မပြောတော့ဘူး။ စစ်တပ်ရှိလို ့ပဲ တခြားနိုင်ငံတွေက ကြည့်နေတာပေါ့။ မိတ်ဆွေက နေ ့ချင်းညချင်း ရန်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက အကြောင်းမဲ့သက်သက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ်ဆိုတာ Camp လား? စစ်သားတွေကို ဘယ်လိုထင်လဲ ?
အကုန်လုံး မင်းတို ့လို လူတွေပဲ ။ မင်းတို ့နဲ ့တူညီတဲ့ အသက်အရွယ်တွေမှာ မိသားစုရဲ့အချစ်ကို ရနေတဲ့ သူ
တွေပဲ။ စစ်ထဲကို ဝင်ချင်လွန်းလို ့ဝင်တဲ့လူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ထင်လဲ ? တာဝန် အရသွားတဲ့ လူတွေရှိ
သလို အနည်းဆုံး တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်တော့ ရှိသင့်တယ် မဟုတ်ဘူးလား ? နိုင်ငံသား ခံယူ၊ နိုင်ငံပြောင်းနဲ ့
တကယ့်ကို နေစရာနိုင်ငံ မရှိရင်တော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဒုတ်ခသည် အနေနဲ ့ပေါ့။
Youn Phyung Do မှာ တာဝန်ကြခဲ့တဲ့ တပ်သားတွေ သေခဲ့ရတာတောင် စစ်တပ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့အပစ်တင် ပုတ်ခတ်နေတယ်။ မင်းတို့ဒီလိုစကားမျိုးမပြောခင် ငါပြောချင်တာက
မင်းတို ့ကအစ အဲဒီ ဆောက်သုံးမကျ အထက်မှာ ဇိမ်ခံနေတဲ့ လွတ်တော်ကကောင်တွေ ကာကွယ်ရေးက
ကောင်တွေရဲ့စကားမှာ ထိတ်လန် ့နေတဲ့ မင်းတို ့က ပိုပြီး ရီဖို ့ကောင်းတယ်။
ဘယ် ဗိုလ်ချုပ်၊ ဘယ်ကာကွယ်ရေး၊ ဘယ် လွတ်တော်က ဇိမ်ခံ အမတ်တွေ စစ်မှုထမ်းစရာ မလိုတဲ ့
ဆောက်ရူးတွေမှ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်မှာမဟုတ်ဘူး ။ နဲနဲလောက် ဦးဏှောက်ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူတွေက
အကိုတွေ ညီတွေ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ ဘယ်သူတွေကတော့ အဖေ အမေ ညီအမ တွေ ဆိုတဲ့ ခွဲခြားမှုတွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး ကာကွယ်နေတာကြောင့် မင်းတို ့ငါတို ့တွေ ဒီလိုရှိနေတာ။
ဗိုက်ပြည့်နေတော့ စစ်ထဲဝင်ချင်တယ် မဝင်ချင်ဘူးဆိုတာတွေ လုပ်မနေနဲ့အဲဒီကို သွားပြီး ဒူးတုန်မနေခင် သင်စရာရှိတဲ့ပညာကိုပဲ အမုံးသင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရဲရဲဝန် ့ဝန့်တခြားနိုင်ငံကို ရှောင်ပြေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီနိုင်ငံကို စွန် ့ခွာပြီး အဲဒီ သိပ်တော်သိပ်တတ်သိပ်ဟုတ်နေတဲ ့ဆရာကြီးတွေရဲ့စကားကို နားမထောင်ချင်လို့နောက်ခေတ်ရဲ့ဦးဏှောက်တွေပြောင်းလဲတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
တပ်သားတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျဆုံးသွားတယ်လို ့ပြောတဲ့ အဲဒီ ဆောက်ရူးတွေနဲ ့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး
ဒီနိုင်ငံကို ဆဲဆိုနေကြတဲ့ ကောင်တွေရဲ့မျက်နှာကို တံတွေးထွေး မနေပါနဲ ့ဦး စစ်သားတွေ စစ်မှုထမ်းပြီး ပြန်လာသူတွေတောင် ဘာမှ မပြောပဲ ဘယ်က မူလတန်း အလယ်တန်း ဦးဏှောက်တွေနဲ့ပြောဆိုနေကြတာ
လဲ မဟုတ်ကြပဲနဲ ့။ စစ်ထဲဝင်တာနဲ့အကုန်သေရောလား ? ဆက်ပြောရရင် နယ်စပ်မှာ စောင့်ရှောက်နေတဲ့ တပ်သားတွေရဲ ့ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကို မင်းတို ့မျက်လုံးထဲမှာ မမြင်ကြဘူးလား ? အားလုံးဟာ တူညီတဲ့ လူ
တွေပဲ၊ တူညီတဲ့သားတွေ သမီးတွေပဲ၊ ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတွေပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာကို ဒါမှမဟုတ် မျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး အခြေခံ အတွေးအခေါ်တော့ရှိကြတာပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံက အားနည်းရင်
တကယ်တမ်း နောက်ဆုံး ခံရတာ ငါတို ့ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ်တိုင်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ အခုလက်ရှိ အခြေအနေမှာတောင် ဒီလိုနိုင်ငံမျိုး ဖြစ်စပြုနေချိန်တောင်မှာ မင်းတို ့တွေက အသားကုန် စစ်မှုထမ်း ဘာညာဘာညာ ခွေးသံတွေ ဆူညံနေ မဲ့ အစား ဒီနိုင်ငံကို စွန် ့ခွာသွားလိုက်ပါလား။ မင်းတို ့ပြောပြောနေတဲ့ ၂၄လ ဆိုတာထက် ပိုပြီး အငြိမ်းစားယူခဲ့ကြတဲ့လူတွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ စစ်မှုထမ်းနေရင်းနဲ ့ပဲ မိသားစုကို လွမ်းဆွေးစိတ်ကို ရင်မှာထားပြီး တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ စစ်သားတွေကို မဟုတ်ပဲ ဟိုး အထက်မှာ ဇိမ်ကျနေတဲ့ သူတွေ လွတ်တော်က ဆောက်ရူးတွေကို ဒါရိုက် သွား ရင်ဖွင့်၊ စစ်သားတွေကိုတော့ မဆဲကြနဲ ့။ ဘယ်သူကမှ ပျော်လို့အဝေးမှာ အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့စစ်သားလုပ်နေကြ
တာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုဆိုရင် ဟိုကောင်တွေနဲ့မင်းတို ့တွေခြားနားတာဘာများရှိလို ့လဲ။ ကဲ ဒီတော့ အားအားယားယား အချိန်ကုန်ခံ မနေကြနဲ့စာသင်ချိန်မှာ စာသင် ဒါမှ မဟုတ် တခြားနိုင်ငံကို ပြောင်းနေကြပေတော့ နွားကလေးတွေရေ……
F:) အစိုးရက မင်းတို ့လို ၁၀၉/၁၁ဝ အကျင့်ပျက် စရိုက် ကလေကချေ ဂျွတ်စဘွတ်တွေကို ဖမ်းပြီး စိတ်ဓါတ်ရေးရာပြုပြင်၊ Game၊ ဆေးလိပ် မူးယစ်ဆေး အရက်သမား လူငယ်တွေကို ပြုပြင်မလို့စစ်မှုထမ်းဖို ့ခေါ်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ၂၄ လ တောင်မဟုတ်ဘူး ၄၈ လ ဆိုလဲ သွားပြီး ပြန်လာခဲ့ကြဟေ့။
အ မ လေး…!!!!!…ဘာကြီးလဲ..ဟ….!!!!!!!!!!!!